वेब स्क्रैपिंग उपकरण - सेमील्ट सल्लाह
डेटा स्क्रैपिंग गैर - टेक्निकल मान्छे को लागि सबै भन्दा जटिल कार्यहरु मध्ये एक हो।. यो किनभने तिनीहरू ज्ञानको कमी छन् र पाइजोन, जावा, गो, जाभास्क्रिप्ट, नोड जे एस, ओबजे-सी, रूबी, र PHP जस्ता भाषाहरू कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा थाहा छैन. प्रोग्रामिंग डेटा विज्ञान को एक अभिन्न भाग हो, तर केहि स्टार्टअप र न्यु योर्सहरु लाई पर्याप्त प्रोग्रामिंग कौशल छैन र अझै पनि गुणवत्ता मा सम्झौता बिना वेब डेटा निकालन चाहते हो. यस्तो व्यक्तिहरूको लागि, निम्न वेब स्क्रैपिंग अनुप्रयोगहरू उत्तम र सबै भन्दा उपयुक्त छन्.
स्क्रैपर (Google क्रोम एक्सटेन्सन)
विभिन्न गैर-प्रोग्रामरहरू र फ्रीलांसरहरू स्क्रैपर मनपर्छ किनभने यसको बेपरवाह डाटा स्क्रैपिंग सुविधाहरू. यो जीयूआई संचालित डेटा विज्ञान उपकरणले आधारभूत र उन्नत वेब पृष्ठहरू दुवै स्क्रैप गर्न सक्छ र तपाईंको काम सजिलो बनाउनको लागि ठूलो मेशिन सिकाउने प्रविधि छ. यो प्लेटफार्म विशेष रूप देखि अमेजन, ईबे, र अन्य त्यहि साइटहरु बाट डेटा निकालन को लागि डिज़ाइन गरिएको छ र एक built-in स्पैम पहिचान को सुविधा हो. यसको साथ, तपाईं स्प्याममा सजिलै स्प्याम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई एक वा दुई मिनेट भित्र हटाउन सक्नुहुनेछ. योसँग राम्रो डेटा निकासीको लागि एक विशिष्ट गुगल एपिआई क्लाइन्ट लाइब्रेरी छ र तपाईंको जानकारी आफ्नो डाटाबेसमा बचत गर्दछ. तपाईं आफ्नो हार्ड ड्राइभ वा छनौटको कुनै अन्य यन्त्रमा डेटा बचत गर्न सक्नुहुन्छ.
आयातको साथ. io, तपाईसँग टेक्निकल दिमाग नहुनु र नियमित आधारमा उच्च गुणस्तर डेटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. यो वेब निष्कर्षण अनुप्रयोगले दाबी गरेको गैर-प्रोग्रामरहरू र डाटा वैज्ञानिकहरूको आवश्यकतालाई अप्ठ्यारो पारेको छ. जस्तै हामी जान्दछौं कि डेटा विज्ञान को तथ्याङ्क र गणित को आवश्यकता हो, प्रोग्रामिंग कौशल, तर तपाईं आयात को उपयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईंलाई केहि जान्न को आवश्यकता छैन. io. यो उपकरण दुवै व्यक्ति र कारोबारको लागि उपयुक्त छ.
किमोनो लैब्स खुल्ला स्रोत स्ट्यान्ड-एक्लै वेब स्क्रैप सफ्टवेयर हो।. यसले मिनेटमा भित्रको विशाल संख्यामा डाटाहरू स्क्रैप गर्न सक्छ. यो नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँछ र गैर-तकनीकी व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त छ. किमोनो ल्याब्ससँग, तपाईंलाई पाइजोन वा कुनै अन्य प्रोग्रामिंग भाषा सिक्न आवश्यक छैन. यसको पूर्वनिर्धारित क्रेलरले तपाईंको डेटा वा फरक वेब पेजहरू अनुक्रमणिका गर्न मद्दत गर्दछ. तपाइँसँग यो डाउनलोड गर्न र यो प्रोग्राम सुरू गर्न र मिनेटको कुरामा तपाईंको लागि किमोनो ल्याब्स स्क्रैप डेटा दिनुहोस्. यसको क्लाउड-आधारित स्याहारले तपाईंलाई सजिलै र चाँडै विभिन्न उपकरणहरू बीचको जानकारी साझेदारी गर्न दिन्छ. किमोनो प्रयोगशालाहरू उद्यमहरू, पत्रकारहरू, अनलाइन रिटेलर्सहरू, दूरसंचार एजेन्सीहरू, र ठूलो मात्रामा फ्रेल्यानरहरूद्वारा प्रयोग गरिँदैछ।.
फेसबुक र ट्विटर एपीआई
बिग डाटा विभिन्न वेबमास्टर्स र गैर-टेक्नोलोजी व्यक्तिहरूका लागि एक प्रमुख समस्या हो।. यसैले, तिनीहरू प्राय: ट्विटर र फेसबुक एपीआई प्रयोग गर्नका लागि उनीहरूको डेटा स्क्रैप गर्नका लागि प्रयोग गर्छन्. एपिआईहरूले हामीलाई विभिन्न वेबसाइटहरू र ब्लगहरूबाट उपयोगी जानकारी निकाल्न मद्दत गर्दछ, र पूर्ण रूपमा स्क्रैप गर्न डेटा कसरी सम्पादन र बचत गर्ने बारे भविष्यवाणी गर्दछ।. सबै भन्दा राम्रो भाग हो कि एपिआइहरू पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा सजिलैसँग वेब सामग्री मेरो खान सक्छ. तिनीहरू स्क्रैप गरिएको डाटाको राम्रो दृश्य प्रदान गर्दछ, यसलाई विभिन्न कोटिहरूमा वर्गीकृत गर्नुहोस्, वा हाम्रो इच्छा र आवश्यकता अनुसार अनुसार विभिन्न ढाँचामा आयात गर्नुहोस्।. यदि तपाईंले प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरूसँग गैर-टेक्निकल व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईंले सोशल मिडिया एपिआईहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ Source .